Shiinaha oo rajaynaya marti gelinta cayaaraha Koobka Adduunka 2030 – Gool FM
(Beijing), 28 Sebt, 2016 –Mas’uuliyiinta Xiirrada Kubadda Cagta Shiinaha iyo Asia ayaa ku rajo weyn in Shiinuhu nasiib u yeesho martigelinta cayaaraha Koobka Adduunka 2030, waxaana ay FIFA ka dalbanayaan in riyadaasi ay u rumeeyaan.
Guddoomiye ku xigeenka xiriirka Shiinaha, Zhang Jian ayaa sheegay in ay yar tahay rajada ay ka qabaan in dhulkooda lagu qabto cayaaraha Koobka Adduunka 2026 maadaama Qatar ay ku guuleysatay marti soorka Koobka Adduunyada 2022, isla markaana Koobka xiga aan isla Qaaradda Asia loogu celin karin.
“Qof kasta oo Shiinees ah waxa uu ku riyoonayaa in Koob Adduun lagu qabto Shiinaha” ayuu Zhang ka sheegay Goa oo ahayd halkii shalay uu ka dhacay shirkii Xiriirka Kubadda Cagta Asia AFC.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo isagu horumar ballaaran gaarsiiyay dalkiisa ayaa isaguna rajo weyn ka qaba in dalkiisu mar uun marti geliyo cayaaraha waaweyn ee Kubadda Cagta.
Marka keliya ee Shiinuhu soo xaadiray Koobka Adduunka waxay ahayd 2002 cayaarihii dunida ee lagu qabtay Korea iyo Japan, waxaana tartankaasi ay ka hareen iyagoo xitaa aan 1 gool dhalin, iyado haatanna Shiinuhu uu kaalinta 78′ kaga jiro kala sarreynta xulalka Kubadda Cagta Caalamka.
Dhinaca kale Horyaalka Shiinaha ayaa ka mid ah Horyaallada soo kacaya waxaana 400 Milyan oo Euro ay ku bixiyaan sanadkan suuqa kala ibsiga ciyaartoyda.
Cristiano Ronaldo "Ma doonayo inaan Tababare noqdo marka aan ciyaaraha ka fariisto"